6ရိယာ XNUMX - ATLAS Tenerife အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
ရောင်းရန် - သဘာဝနှင့်ထင်းရှူးပင်များဝိုင်းရံထားသည့် Tenerife ကျွန်း၏ထူးခြားသောနေရာတွင်ပုံမှန် Canarian အိမ်။ အိမ်တစ်လုံးအတွက် ...
ရောင်းရန် Los Silos, Tenerife အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ Penthouse တိုက်ခန်း။2လုံးသာအိမ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောကျယ် ၀ န်းသောတိုက်ခန်း။ ကြီးမားပြီး ...
ရောင်းရန်: La Vega, Tenerife တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အိမ်များကို! အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာနှင့် Teide အမြင်များ! ပျူငှါနွေးထွေးသောနှင့်အလွန်သတိပညာပြည်တွင်းရေးဟင်းလင်းပြင်။ အဟောင်း ...
အောင်မြင်သောဟိုတယ်လုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်း! Tenerife ရှိအလည်ပတ်ဆုံးနေရာများထဲမှ ၆၈၀ မီတာမီတာရှိသောအဆောက်အ ဦး - နာမည်ကျော် Dragon Tree Plaza ...
ရောင်းရန် - ဆန်ဘာနာဒို၊ Los Silos၊ Tenerife 360ºအမြင်များ မကြာသေးမီက 100% ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ! ကြီးမားသောပုဂ္ဂလိကကားရပ်နားရန်နေရာ။ ပျူငှါနွေးထွေးသောပြည်တွင်းရေးဟင်းလင်းပြင်။ ဆိုလာပြားများ ...
ရောင်းရန် - Tenerife, Puertito de Los Silos ရှိပထမဆုံးသမုဒ္ဒရာအတန်းရှိအံ့ဖွယ်ကောင်းသောပစ္စည်းများ။ ၈ လွှာရှိအိပ်ခန်း ၈ ခန်း၊
စားသောက်ဆိုင် + အိမ် + မြေ။ ကိုယ်ပိုင်ငှားပါ။
စျေးနှုန်းလျှော့ချ! Buy-it-Now အတွက်€ 159.000 သို့မဟုတ် Rent-to-Own အတွက်ယူရို ၂၀၀,၀၀၀ ပဲ။ ပြီးပြည့်စုံသော LIFESTYLE စီးပွားရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်း Tenerife! All-in-one: ကြီးမားသောစားသောက်ဆိုင်၊ ကျယ်ဝန်းသောအိမ်နှင့် ...
ကမ်းရိုးတန်း Icod ခုနှစ်တွင်လှပသော Finca
Icod de los Vinos ကမ်းရိုးတန်းရှိရောင်းရန်လှပသော finca ။ စတုရန်းမီတာ ၈၀ ရှိသောအိမ်အကျယ်အဝန်း ၆၀၀၀ မီတာရှိသည်။
ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဗီလာနှင့်မြင်းပြိုင်ကားနှင့်အတူကြီးမားသော Finca
ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အိမ်များ၊ မြင်းများနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သော finca များကိုရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ Buenavista del Norte, Tenerife ။ အဓိကနေထိုင်ရာနေရာ၊ ၀ ိုင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ကောင်းမွန်သောနေရာ ....
Buenavista del Norte costal မြို့၊ Tenerife ရှိရောင်းမည့်လုံးချင်းအိမ်ကျယ် ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောနေရာ။ ရှေ့တွင်ဘယ်သူမှမဆောက်ရ ...
ရောင်းရန်: Tenerife, Los Silos ၏သက်တောင့်သက်သာရှိသောတိုက်ခန်းကျယ်ရှိတိုက်ခန်းကျယ်။ built-in ဗီရိုနှင့်အတူကျယ်ဝန်းအခန်းပေါင်း4။ မြင်ကွင်းကျယ်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်။ မီးဖိုချောင်ကြီးနှင့် ...
ကမ်းခြေမှ ၁၀၀ မီတာအောက်သာတိုက်ခန်း
Tenerife၊ La Caleta de Interian ရှိရောင်းမည့်လှပသောကမ်းခြေတိုက်ခန်း။ အဆိုပါတိုက်ခန်းနီးပါးအသစ်ဖြစ်၏! ဒုတိယသမုဒ္ဒရာအတန်းတွင်ကောင်းမွန်စွာတည်ရှိသည် ...
Masca အနီး၊ Las Portelas ရှိကျေးလက်အိမ်
နာမည်ကြီးမက္ကာချောက်နားအနီးရှိ Las Portelas ရှိရောင်းမည့်သက်တောင့်သက်သာရှိသောကျေးလက်အိမ်လေး။
Restore ရန် Masca ရှိအိမ်
ရောင်းရန် - မက်ဆီကာရှိရိုးရာအိမ်၊ အိမ်သည်နေထိုင်သူများသာ ၀ င်ရောက်နိုင်သောရွာတိတ်ဆိတ်သောနေရာတွင်ရှိသည်။
သမုဒ္ဒရာမှ 400 m ကျယ် ၀ န်းသောတိုက်ခန်း !!
ရောင်းရန်: Tenerife, Playa de Los Silos ရှိမြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများပါသောတိုက်ခန်းကြီးတစ်ခန်း !! အလွန်ကောင်းသောနေရာ။ သဲသောင်ပြင်, အများပြည်သူရေကူးကန်, အများအပြားကသဘာဝရေကန်များနှင့် ...
ရှုခင်း ၃၆၀ ºရှိသောပင်လယ်ပြင်နှင့်ရေလှိုင်းရှုခင်းပါသောလုံးချင်းအိမ် !!
ရောင်းရန် - အံ့သြဖွယ်ရာ ၃၆၀ ံပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနှင့် Teide တောင်တန်းများရှိGenovésရှိအိမ်၊ တိတ်ဆိတ်တဲ့လူကူးလမ်းပေါ်မှာသီးခြားတည်နေရာ။ လှပပြီး ...
Cueva Del Viento ရှိအရည်အသွေးဗီလာ
belgian arquitect အားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်အိမ်ဆောက် အိမ်ယာတွင်ပါဝင်သည်မှာ ၁။ ပင်မအိမ် - apx ။ 1 sq.m. 165. ကားဂိုဒေါင် - apx ။2sq.m. ၃ ....
၃၆၀ ကြည့်ရှု့နိုင်သောလုံးချင်းအိမ် အဆိုပါ Taco တောင်ပေါ်မှာထိပ်ဆုံးအိမ်!
ရောင်းရန်: Los Silos၊ Tenerife ရှိ360ºကြည့်ရှုနိုင်သောကျယ်ဝန်းသောအိမ် !! လမ်းပေါ်ရှိနောက်ဆုံးအိမ်နှင့်အကျော်ကြားဆုံးအပေါ်ဆုံးအိမ် ...
Buenavista ဂေါက်ကွင်းအနီးရှိကျယ်ဝန်းသည့်အိမ် + Finca!
Tenerife ရှိ Buenavista del Norte တွင် finca ရှိရောင်းမည့်အိမ်။ အိမ်သည်မြို့ပြမြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ...
Icod De Los Vinos ရှိကျေးလက်အိမ်
Icod de Los Vinos တွင်လှပသောလုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်။ သမုဒ္ဒရာနှင့် Teide တောင်တန်းများအပေါ်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများစွာပါရှိသောလှပသောနေရာဖြစ်သည် ....
Tenerife၊ Las Portelas၊ Buenavista del Norte ရှိရောင်းမည့်အိမ်